Semalt dia manome dingana telo tsotra mba hisorohana ny malware pop-ups sy spam
Raha mijery ny Internet isan'andro ianao, dia tokony ho zatra amin'ireo dokam-barotra pop-up, malware, ary spam. Ireo doka hafahafa dia tonga amin'ny endriny samihafa ary miezaka mamidy anao vokatra na serivisy manokana. Na dia mailaka ara-drariny sy azo antoka aza ny mailaka sy ny pop-ups amin'ny marika sy ny orinasa mendrika, ny programa fampiasa amin'ny rindrambaiko malaza tsy ara-dalàna sy ny pop-ups dia hametraka spyware ary hijinja ny tranonkalanao. Izy ireo koa dia hisambotra ny mombamomba anao manokana, toy ny antsipirian'ny carte de crédit ary ny PayPal ID.
Oliver King, ilay Semalt Mpitarika Success Manager, dia milaza fa ny mailaka an-jambany na spam dia endrika fanosoram-potaka. Raha manana hafatra be dia be avy amin'ny orinasa na olona tsy fantatrao ny mailakao, dia mety manana ny malware amin'ny solosainao ianao. Ny hafatra sy ny mailaka an-tserasera dia nanjary fomba malaza hampielezana ny malware sy ny spyware. Ireo mpitsoa-ponenana dia mamitaka anao amin'ny hetsika ratsy ary mandefa mailaka tsy misy dikany sy tsy misy ilana azy isan'andro. Google dia mizara fa maimaimpoana maherin'ny valopolo tapitrisa no nalefa isan'andro, saingy azo atao ny miala amin'ny pop-ups sy spam malware amin'ny dingana telo tsotra.
Dingana 1: Esory ireo programa tsy fantany avy amin'ny navigateur Google Chrome (Windows fotsiny) :
Raha mampiasa fitaovana Linux na Mac ianao dia mety tsy hahazo tombony amin'ity dingana ity..Ary raha mampiasa Google Chrome ianao ho toy ny navigateur voalohany, azonao atao ny manala na manakana ny pop-ups sy spam malware amin'ny fomba manaraka:
Mametraka plugin iray tahaka ny Adblock Plus ary manaisotra ireo programa tsy ankanesana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny safidy "Remove". Google Chrome dia hanampy anao hanala ny malware, hametraka ny votoatin'ny default ary hamafa ny fanitarana anao.
Aza adino ny manomboka ny solosainao aorian'ny nametrahanao sy navitrika ity plugin ity.
Mba hampidirana ireo rindrina izay itokisanao, mandehana any amin'ny safidy fanampiny Extras - Extensions ary tsindrio ny bokotra Enable.
Dingana 2: Esory ny programa tsy ilaina amin'ny solosaina rehetra:
Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Open book 01.svg Anarana iombonana [[sokajy: Endrika:
Mandehana any amin'ny solosaina ao amin'ny solosaina ary tsindrio ny bokotra Applications.
Tadiavo ny dokam-barotra na ny spam izay tsy fantatrao na tianao hanesorana.
Tsindrio ny bokotra Move to Trash ary tsindrio eo amin'ny Tranonkala mialona mba hanaisotra ny malware avy hatrany.
Dingana 3: Ajanony ny sehatry ny browser amin'ny solosaina rehetra:
Azonao atao ny mamerina mametraka ny sehatry ny tranokala amin'ny ordinatera miaraka amin'ireto fomba manaraka ireto:
Sokafy ny navigateur Firefox na Chrome ao amin'ny solosainao.
Tsindrio ny safidy Settings ary mandehana any amin'ny faritra Advanced
Ny dingana manaraka dia ny manindry ny bokotra Reset ary manamarina ny fihetsika ataonao amin'ny fipihana ny bokotra Save
Ireo hafatra amin'ny malware na ny spyware dia mety ho avy amin'ny loharano rehetra, ka azonao atao ny manova ireo fomba ireo hanesorana azy rehetra. Na mahazo mailaka mampiahiahy ianao na mahita pop-pihetseham-po mahatsiravina, dia ho afaka ny hanala azy ireo ianao ary hankafy safidy am-pilaminana ny Internet safidy Source . Mandritra izany fotoana izany, tsy tokony hanokatra mihitsy ny mailaka sy ny hafatra an-tsoratra amin'ireo sendikà tsy fantatra